Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 30
Inaad qoraa noqoto ma ahan wax fudud. Dad badan ayaa jira oo ku fakiraayo inay noqdaan qoraa, balse waxay dareemayaan inay ku adagtahay inay wax qoraan ama ay qoraan buugg. Dabcan qoraanimadda ma ahan wax fudud, waa wax u baahan hawlo badan. Qofka qoraaga ah waxaa loogu baahanyahay inuu yahay qof, § Wax curuni karo § Wax sharaxi karo § Wax tusaallayni kara § Wax si fudud u tusini kara aqristaha § Wax u sharaxi karo sidda ugu wanaagsan ee loo fahmi karo qoraalkiisa/qoraalkeeda § Waxwalbo dhex-dhexaad ka noqoni kara § Ku wanaagsan wadaniyadda Qoraaga waa shaqsi muhiim u ah …
Wakhti-yadaan dambe waxaa siyaasadda Soomaaliyeed ka soo ifbaxaayo ama kasoo dhex-muuqanaayo dhalinyaro waxbartay, hadana doonaayo inay wax u qabtaan dalkooda, diintooda iyo waliba dadkooda. Marka la doonaayo in wax laga ogaado bulshooyinka caalamka waxa ugu horeeyo ee la fiiriyo waa heerka dhalinyarada iyo dhalaanka. Bulsho walbo waxay ku faantaa dhalinyaradooda. Dhalinyarada waa halbeega bulsho walbo oo ka jirta caalamka. Aniga Cabduljabaar ahaan waxaan la sheekeystay dhalinyaro badan kuwaasoo iskuugu jira kuwa waxbartay iyo kuwa aanan waxbo baranin. Dhammaan dhalinyaradaas waxay u badnayeen kuwa jecel inay wax ka qabtaan ‘Illaahay ayaa wax qabtee’ dhibaatada haysato bulshada. Dhalinyarada qaar waxaad moodaa in …